Gareen tokko ka’ee olola feesbuukiitiin “sartifikeetii Oromummaa” namaaf kennuus ta’e namarraa mulquuf aangoo hinqabu -
bilisummaa October 7, 2018	Leave a comment
(Gareeb maqaa qabsootiin bara 28 Asmaraarra kora guddaa, kora xiqqaa, guyyaa WBO jechuun hawaasa Oromoo diigaa baate yeroo ammaa biyya keessatti dargaa qindeessite amala sii oofa jirtu jedhu)
Olola jibbiinsaa dhuunfaadhaan tibbana narratti oofamaa jiru tuffadhee bira darbuu yaadeen ture. Ta’us ololli narratti oofamaa jiru karaa qindaa’een waan itti fufee jiruuf yaada gabaabaa kennuun barbaada.
Anaaf Oromummaan Oromoorraa dhalatanii, Oromoodhaaf waan tolu hunda hanga humni ofii danda’een gumaachanii, Oromoodhaaf afaaniin otuu hintaane gochaan waa gumaachanii darbuudha! Oromummaa olola sobaatiini namaaf kenuus ta’e namarraa mulquun hindanda’amu. Gareen tokko ka’ee olola feesbuukiitiin “sartifikeetii Oromummaa” namaaf kennuus ta’e namarraa mulquuf aangoo hinqabu. Nama garaagarummaa yaadaa waliin qaban yaada isaa yaada caaluun falmuu malee olola sobaa qinda’aa banuun olola jibbiinsaa oofuun duubatti hafummaaadha.
Previous HEGEREE QEERROO KEENYAAF HAA YAADAMU!
Next የአቶ ዳዉድ አነጋገር በንድፈ ሀሳብ ደረጃ ምን ማለት ነዉ?